Ogaden News Agency (ONA) – Qarax Ka Dhacay Meel Aan Ka Fogayn Qunsuliyada Maraykanka ee Magaalada Jiddah.
Posted by ONA Admin	/ July 5, 2016
Wasaaradda Arrimaha gudaha Sacuudiga ayaa sheegtay in nin isa soo miidaamiyey uu isku qarxiyey meel u dhow qunsuliyadda Mareykanka ee magaalada galbeedka dalkaas ku taalla ee Jeddah.
Wasaaradda ayaa sheegtay in ciidamada ilaalada ay ninkaas aad uga shakiyeen, markii ay kusoo dhaqaaqeenna uu is-qarxiyey. Qaraxan ayaa waxaaa ku dhintay ninkii fuliyey, islamarkaana laba kamid ah ilaalada ayaa waxaa kasoo gaadhay dhaawac fudud.
Safaaradda Mareykanka ee Sacuudiga ayaa sheegtay in wax dhib ah uusan soo gaadhin shaqaalaha qunsuliyadda. Safaaradda ayaa mar kale kucelisay digniinaheeda ku wajahan Sacuudiga, ayadoo ku boorisay dadka Mareykanka ah inay xaddidaan safarrada aan muhiimka ahayn ee ay ku tagayaan Sacuudiga.
Sanaddii 2004-tii ayaa mintidiin xidhiidh la leh Al-Qacida oo hubeysan waxay bam gacmooyin ku weerareen qunsuliyaddan, kadibna dagaal dhex maray ayaga iyo ciidamada ilaalada ah ee Scauudiga ayaa waxaa ku dhintay shan ka mid ah shaqalaha qunsuliyadda oo aan Mareykan ah.